Kulanka Afasooni Amnigiisa oo la wareegeen Ciidamada Amison | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kulanka Afasooni Amnigiisa oo la wareegeen Ciidamada Amison
Kadib guul laga gaaray wadahadaladii dhanka amniga ee shalay dhexmaraya Madaxda amniga Madaxwayne Farmaajo, shanta maamul goboleed iyo Amisom, ayaa waxaa maanta shir lagu sheegay in uu hordhac u yahay kan rasmiga ah uu dhexmarayaan Madaxda dawladda Maamul goboleedyada iyo goboka banaadir.
Amaanka goobta waxaa sugaya ciidamada Amisom, iyada oo ay gudaha Teendhadana joogaan security ga Madaxwaynaha iyo Maamul goboleedyada.
Goobjoogayaal ku sugan Teendhada shirku ka socda ayaa ii xaqiijiyay in aanay jiray wax ciidan labisan ah oo lagu arkayo gudaha teendhada, halka Ciidamada Amisom lagu arkayo hareeraha goobta shirku ka socdo.
Wixii warqr dheeraad ah halkaan kala soco.
Previous articleTaliska Boliiska oo warqad mudaa la qarinaaye maanta soo saaray si shirka Afasiyooni loo carqaladeeyo
Next articleSargaal Caan oo Dowlada Federaalka oo loiga dilay Dagaalkii.Maanta Bariire
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee dalka Itoobiya u qaabbilsan Soomaaliya Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan. "Madaxweyne Farmaajo...
Madaxweyne kuxigeenka HirShabeelle oo golaha Wasiirada maamulkaas kulan kula yeeshay...
Aqalka sare ee Mareykanka oo ka wal walsan in...